Monday, May 17, 2021 4:54 pm
Ayan Ahmed Zubeyr says:
waa website-ki ugu horeyay oo Soomali ledahay oo sidan aan uga faa’ido. aad baad u mahadsantihiin.
Mahadsanid walaal Ayan, waana ku faraxsanahay inaad websiteka ka faa’iidey aqoon kororsi.
Waxaad samaysay wax fiican oo loo baahnaa.
ilaa 2012 kii ilaa maanta 2021 isku si ayaa loo baadhaa ciwaankan, walina loo sii baadhi doonaa marba cida ubaaahata, alle ajarkeeda ha ku siiyo